Haweeney magac madaxweyne caan ah la baxaysa si ay kaalmo u hesho | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Haweeney magac madaxweyne caan ah la baxaysa si ay kaalmo u hesho
Haweeney magac madaxweyne caan ah la baxaysa si ay kaalmo u hesho
Durban, Ireland (Radiohimilo) – Si ay caawimaad dheeraad ah ugu hesho gargaarista seygeeda oo xaruuragan lana silcaya xanuun sanbabada ku dhaca, inay magaceeda ku badasho ama la baxdo Donald Trump oo ah madaxweyne dhawaan la doortay ee Maraykanka waa doorashooyinka uga furan wacyi-gelinta sida looga kaalmeyn karo dhibaatada uu ku sugan yahay ninkeeda.
Helen Mcdonnell, oo 57-jirad ah, waxay lacag taakulo ah u ururinaysaa seygeeda Peter, oo 58 jir ah, kaas oo la xanuunsanaya cudur sanbabada ku dhaca.
Kahor intaysan dhamaan doorashadii Maraykanka, Mcdonnell waxay barteeda ku qortay: “Waxaan quuddareynayaa inaan si sharci ah magacayga ugu badalo midkood labada musharax ee Hillary iyo Trump kan soo baxa si aan deeq ugu ururiyo gargaarka seygeyga oo iga xanuunsan.”
Hadda oo Donald Trump loo hubiyay inuu noqonayo madaxweynaha xiga ee Maraykanka, Helen Mcdonnell waxay tagaysaa maxkamadda si ay u buuxiso codsiga ah inay magaciisa ku badalato keeda.
Lamaanahan ayaa is qabay muddo 34 sanadood ah. Waxay sheegtay in saaxiibkeedu uu ahaa gacaliye iyo sokeeye dhab ah oo nolosheeda kaalin weyn ku leh.
Peter ayaa sanadkii 2013 waxaa lasoo gudboonaatay xanuunka dhinaca sanbabada ah waxaana loo sheegay inuu u baahan tahay in kilyo cusub lagu beero iyo inuu marayo qaliinno dhowr ah oo ku saabsan daweyntiisa.
“Xalka ugu weyn ee waa inuu helo kilyo beerid cusub: sanadahan oo dhan wuxuu neefta ku qaadanayay ogsijiin,” ayay tiri afadani.
Waxay tilmaantay in fikirkan uu ula yimid ina abtigeed – rajadeeduna maxuma marka loo eego wacyigeeda oo gaaray kala bar dunida oo dhan. Lamase oga waxa uu Donald Trump kaga fal-celin doono baaqa haweeneydan la baxday magaciisa si ay kaalmo uga hesho.
Previous: La kulan ninka xanaaneeya 735 Eey